မမ ဆောင်းဘဝမှာ စကားပဲ မှားတာပါ ကျန်တဲ့ အမှား မရှိခဲ့ ပါဘူးလို့ ပရိသတ်ကြီး ကို တောင်းပန် – Shwe Ba
မမ ဆောင်းကတော့ ရည်းစား တောင် မထားတဲ့ အပျိုလေး ဆိုတော့ သိက္ခာကျ သွားတယ် မမ ဆောင်း ဘဝမှာ စကားပဲမှားတာပါ ဘဝမှာ ကျန် တဲ့ အမှား မရှိခဲ့ဘူး စကားပြောတာ ဘရိတ်မရှိသလို ဖြစ်သွားတာပါ” လို့ သူ့ရဲ့ မှားယွင်းမှုအတွက် ကိုရန်အောင်ပရိသတ်နဲ့တကွ ပရိ သတ် ကြီးကို တောင်းပန်ပြောကြားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်ဝင်တေးတွေမှာသာမက ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပါ ရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် အကယ်ဒ မီ နဲ့ လွဲခဲ့ သူ မင်းသမီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းကတော့ သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေဆိုမှု ရှုပ်ထွေးသွားရာကနေ လူပြောများခဲ့သူတစ်ဦး ပါ။ သူမဟာ ”ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းရဲ့ ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ်လား? ဘောလုံး ဥက္ကဌလား?“ ဆိုပြီးတော့။
ဝေဖန် မှုတွေက မြင့်တက် လာရာမှ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားခံလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အင်တာဗျူး ဖြေဆိုပုံတွေ ပွင့်လင်းတဲ့ ပြောဟန်တွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေကြား နားလည်မှု လွဲစရာတွေဖြစ်လာခဲ့ရပြီး အခုတစ်ခါမှာလည်း စကားမှား ခဲ့တာကြောင့် မင်းသားရန်အောင်ကို စော်ကား သလို ဖြစ်ခဲ့တာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။စကားပြောတာ ဘရိတ်မရှိတော့ စည်းမရှိသလို ဖြစ်သွား တာပေါ့။တချို့စာနယ်ဇင်းဆရာတွေက နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မေးတဲ့အခါ ကိုယ်တွေ ကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရတာပေါ့ နော် အဲ့ အတွက် အမှားရှိခဲ့ရင် မင်းသားကိုရန်အောင်ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို မမဆောင်း တောင်းပန်ပါ တယ်” လို့ သူမက ဖြေဆိုထားတာပါ။
မီဒီယာ တစ်ခုက မေးမြန်းထားတဲ့ အွန်လိုင်းမှာ မဖွယ်မရာပုံတွေ ပို့တာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မေးခွန်း ကို မမဆောင်းဖြေရာကနေ မင်းသားရန် အောင် ကို ထိခိုက်သလို ဖြစ်သွားစေခဲ့တာပါ။အဲဒီ့အတွက် သူမက “သူ့ပုံတွေထည့်ဆက်ပြီး လုပ်လိုက်ကတည်းက ကိုယ်သိလိုက်တယ် သူ စိတ်ဆိုး မှာပဲ ပုံတေ တက်လာတော့ မီးမီး ကြောက်တယ် မီးကြောက်တယ်ဖြစ်သွားတာ အဲ့တာနဲ့ တင်တဲ့မီဒီယာကို ဖျက်ချပေးဖို့ တောင်း ပန်ပြီး မှ အစ်ကို့ကို တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်” လို့ သူမတောင်းပန်ရင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ အစ်ကိုတို့က စိတ်ထားပြည့်ဝသူတွေဆိုတော့ စိတ်မ ဆိုးတော့ ပါဘူး လို့ ပြောပြကာ ရန်အောင်ကတော့ မမဆောင်းကို အပျိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက် စကားပြောမမှားဖို့ ဆုံးမခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
မမ ဆောငျးကတော့ ရညျးစား တောငျ မထားတဲ့ အပြိုလေး ဆိုတော့ သိက်ခာကြ သှားတယျ မမ ဆောငျး ဘဝမှာ စကားပဲမှားတာပါ ဘဝမှာ ကနျြ တဲ့ အမှား မရှိခဲ့ဘူး စကားပွောတာ ဘရိတျမရှိသလို ဖွဈသှားတာပါ” လို့ သူ့ရဲ့ မှားယှငျးမှုအတှကျ ကိုရနျအောငျပရိသတျနဲ့တကှ ပရိ သတျ ကွီးကို တောငျးပနျပွောကွားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ဇာတျဝငျတေးတှမှောသာမက ရုပျရှငျကားကွီးတှပေါ ရိုကျကူးခဲ့ပမေယျ့ အကယျဒ မီ နဲ့ လှဲခဲ့ သူ မငျးသမီး ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျးကတော့ သူ့ရဲ့အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ဖွဆေိုမှု ရှုပျထှေးသှားရာကနေ လူပွောမြားခဲ့သူတဈဦး ပါ။ သူမဟာ ”ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျးရဲ့ ခဈြသူဟာ ဆရာဝနျလား? စဈဗိုလျလား? ဘောလုံး ဥက်ကဌလား?“ ဆိုပွီးတော့။
ဝဖေနျ မှုတှကေ မွငျ့တကျ လာရာမှ ပရိသတျ စိတျဝငျစားခံလာခွငျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့အငျတာဗြူး ဖွဆေိုပုံတှေ ပှငျ့လငျးတဲ့ ပွောဟနျတှေ ကွောငျ့ ပရိသတျ တှကွေား နားလညျမှု လှဲစရာတှဖွေဈလာခဲ့ရပွီး အခုတဈခါမှာလညျး စကားမှား ခဲ့တာကွောငျ့ မငျးသားရနျအောငျကို စျောကား သလို ဖွဈခဲ့တာကို စိတျမကောငျးဖွဈတာကွောငျ့ ပွနျလညျတောငျးပနျခဲ့ပါတယျ။စကားပွောတာ ဘရိတျမရှိတော့ စညျးမရှိသလို ဖွဈသှား တာပေါ့။တခြို့စာနယျဇငျးဆရာတှကေ နှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျ မေးတဲ့အခါ ကိုယျတှေ ကလညျး အတတျနိုငျဆုံး ဖွရေတာပေါ့ နျော အဲ့ အတှကျ အမှားရှိခဲ့ရငျ မငျးသားကိုရနျအောငျရဲ့ ပရိသတျတှကေို မမဆောငျး တောငျးပနျပါ တယျ” လို့ သူမက ဖွဆေိုထားတာပါ။
မီဒီယာ တဈခုက မေးမွနျးထားတဲ့ အှနျလိုငျးမှာ မဖှယျမရာပုံတှေ ပို့တာနဲ့ပတျသတျတဲ့ မေးခှနျး ကို မမဆောငျးဖွရောကနေ မငျးသားရနျ အောငျ ကို ထိခိုကျသလို ဖွဈသှားစခေဲ့တာပါ။အဲဒီ့အတှကျ သူမက “သူ့ပုံတှထေညျ့ဆကျပွီး လုပျလိုကျကတညျးက ကိုယျသိလိုကျတယျ သူ စိတျဆိုး မှာပဲ ပုံတေ တကျလာတော့ မီးမီး ကွောကျတယျ မီးကွောကျတယျဖွဈသှားတာ အဲ့တာနဲ့ တငျတဲ့မီဒီယာကို ဖကျြခပြေးဖို့ တောငျး ပနျပွီး မှ အဈကို့ကို တောငျးပနျခဲ့ပါတယျ” လို့ သူမတောငျးပနျရငျး ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။ အဈကိုတို့က စိတျထားပွညျ့ဝသူတှဆေိုတော့ စိတျမ ဆိုးတော့ ပါဘူး လို့ ပွောပွကာ ရနျအောငျကတော့ မမဆောငျးကို အပြိုလေးဖွဈတဲ့အတှကျ စကားပွောမမှားဖို့ ဆုံးမခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ ။